Nooca WEB ee OpenOffice wuxuu la tartami doonaa Microsoft iyo Google Office. | Laga soo bilaabo Linux
koodhka | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
Waxay isku sifeeyaan sida shirkad furan oo softiweer ah, "Shirkad softiweer ah oo furfuran oo khalkhal galisay", Furan-Xchange, koox horumariyayaal ah oo ka mid ah qolalka caanka ah ee OpenOffice office suite ayaa shaaciyay sii deynta Dukumiintiyada OX, qolka xafiiska daruurta ku saleysan ee ku shaqeeya shabakad kasta oo shabakad ah, oo tilmaamaya OX Text oo ah qalab erey lagu sameeyo.
Bilowga Abriil waxay noqon doontaa daqiiqada ay doorteen shaqaalaha mashruuca inay soo bandhigaan nooca ugu horeeya ee qalabkan hoos yimaada Ruqsadda GNU iyo Creative Commons (Shatiga Guud ee GNU 2 iyo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5). Markii la bilaabay, laba codsi oo kale oo qayb ka noqon doona qolalkaan, Bandhigga iyo Faafinnada, ayaa sidoo kale lagu dhawaaqi doonaa, aalado, sida laga yaabo inay muujiyaan magacyadooda, ayaa noo oggolaan doona inaan sameyno bandhigyadeenna oo aan abuurno ama maamulno xaashiyahayaga, in marka lagu daro la shaqeynta qoraaladayada qoraalka kor ku xusan ee OX.
Barnaamijka softiweerku wuxuu si toos ah noo siinayaa suurtagalnimada in wax laga beddelo qaababka qoraalka ee ka tirsan Microsoft Word (.docx) iyo OpenOffice / LibreOffice (.odt). Sidoo kale waa suurtagal habka tafatirka qoraalka iskaashiSi kale haddii loo dhigo, isticmaaleyaal fara badan ayaa awoodi doona inay eegaan oo wax ka beddelaan waxa ku jira isla dukumiintiga waqtiga dhabta ah ee ku saleysan «iskaashi habaysan«, Marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan wax ka qabanno noocyada dukumiintiyada ee qaabab kale oo badan.
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee barnaamijyadan ayaa ah taageero aan burburin qaababka ay leeyihiin Microsoft iyo OpenOffice / LibreOffice, taas oo macnaheedu yahay in dukumiintiyada ku saleysan XML la aqrin karo, la tafatiri karo laguna keydin karo qaabka asalka ah oo leh shahaado aaminnimo ah oo aan waligeed horay loogu helin arjiga leh astaamahan (xusuusnow inaan ka hadlayno a barnaamijka ku saleysan webka).
Open-Xchange waxay bixin doontaa rukhsad ganacsi oo na siin doonta taageerada isgaarsiinta iyo hawlwadeenada mobilada, shirkadaha martigelinaya, shirkadaha daruuraha, VAR iyo SI si ay awood ugu yeeshaan SaaS, maareynta adeegyada iyo istaraatiijiyadaha teknolojiyadda moobiilka.
Haddii ay dhacdo in loo adeegsado barnaamijkan adeegsi shaqsiyeed, hay'adaha samafalka ama kuwa aan faa'iido doonka ahayn, waxaan u isticmaali karnaa gebi ahaanba bilaash.
Waxaan idiinka tegayaa muuqaal yar oo hordhac ah.
Maxaad u malayn inaad u adeegsanayso qalabka daruuraha ku kaydiya macluumaadkaaga?
Miyaad ku kalsoon tahay adeegga noocan ah shaqsi ahaan iyo adeegsi xirfadeed?
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato OX Text waad gujin kartaa Halkan.
Tarjumaad bilaash ah oo ah wararka asalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Nooca WEB ee OpenOffice wuxuu la tartami doonaa Microsoft iyo Google Office.
Waqtigeyga waxaa loogu yeeri jiray Google Docs not Google Office xD
Warku waa da 'weyn yahay mana garanayo waxa laga helayo, laakiin qodobbada kale waxba lagama soo qaadin wax xiriir ah oo la leh xafiis furan, laga yaabee kuwa maqaalka ku qoran ee Ingiriisiga ah inay alifeen
Warku ma duugoobin tan iyo markii ay muujineyso taariikhda la siidaayo ee la siidaayo ugu horeysa iyo iskuxirka si loo tijaabiyo arjiga, xogta aan aaminsanahay inaan horey loogu soo bandhigin meel kasta, iyo ku saabsan xiriirka OpenOffice waxaan kuu gudbinayaa shaashadda qabashada ee aan ku dhajiyay faallo hore, dukumenti ay ku dhejiyeen iyaga tusaale ahaan goobta arjiga.
Ku jawaab koodhka
Haddii aad u timaaddo inaad muujiso toddobaad ka dib bogga oo dhan, haddii uu duug yahay, oo qabashadaada aysan i caawinayn, waa inaan akhriyo (dhinaca midig ee hoose) si aan u hubiyo, iyo haa, waan ka cudurdaaranayaa xD-gaas
Waxaan u maleynayaa in fikraddaada hore / cusub ay tahay inaad dib u eegto, waxaan u maleynayaa inay tahay wax xoogaa shakhsiyan ah oo aad u isticmaasho sida ay kugu habboon tahay.
Dhinaca kale, bogga aad ka heli karto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan wararka ayaa lagu muujiyey maqaalka, waxay ahayd inaad taxaddar badan muujiso ka hor intaadan ku eedeyn qofna inuu alifay macluumaadka, waa uun talo dhexdhexaad ah, waad u madax bannaan tahay inaad raacdo ama maya.
Maaddaama ujeeddada maqaalka aysan ahayn in khilaaf la abuuro, waxaan u arkaa in arrinta halkan lagu xalliyey.
Old waa calal - iyo Debian !!
Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto bedel wanaagsan!
Waan isku dayay waana raaxo 😀
sidee u dhigtaa desktop-ka qeybta isticmaalka?
Ku jawaab si dhakhso leh
ayaa lagu darayaa dhamaadka
Oo waan jeclahay interface ka, runtii soo jiidasho leh. Shaki la'aan, haddii OpenOffice ay ka hesho wax sidan oo kale ah desktop-ka, aniga ayey igu dhici doontaa si hagar la’aan ah.
Runtii waxaan u maleynayaa inay shaqo weyn ka qabanayaan qeybta garaafka, waan sugi doonaa inta ay ka qaangareyso inaan aragno waxa ay na siiso.
Kama shaqeeyo Firefox
Xaaladdayda ku jirta Firefox 19.0.2 si fiican ayey u shaqeysaa.
Waxay leedahay interface la mid ah calligra, sidee buu u shaqeeyaa marka daaqadda la yareeyo? Miyay la qabsanaysaa mise maaha inay yareyso booska
Qariib, kaliya waxaan ku tijaabiyay isla noocii Firefox ee adiga.
Maxaa dhacaya waa in Arch uu isticmaalo ...
la xaqiijiyey, waxay ku shaqaysaa Firefox 19.0.2, inkasta oo ay ku qoran tahay af Talyaani Oo
Jidka qoraalka, wadashaqeynta ka dhaxeysa OX iyo LO waxay noqon doontaa mid faa iido badan leh hadii awoodaha kala duwan la isku daro waxna ka geysto UI 😀
Waxaa lagu ridi karaa Isbaanishka qaybta 'XD menu'
Tani waa wax ka badan war wanaagsan, waa wax aad u fiican :-D. Waqtigan xaadirka ah waxaan u isticmaalay oo kaliya "dusha sare" maadaama ay tahay muunad, markaa waxaan ku siin doonaa waqti dheeri ah oo aad ku soo aragto, laakiin waxay umuuqataa mid rajo leh. Waxaan sidoo kale sugaa «Spreadsheets» 😉
Tani waa war wanaagsan: D. Waxay umuuqataa mid weyn.!
Liisanka Creative Commons looma sameeyo barnaamijyada. Fikrad xun ragga.
Uma arko dhibaatada
Haddii rukhsadaha loo abuuray nuxurka hal-abuurka bulshada markaa iyagu ma khusayn karaan softiweerka si la mid ah farshaxanka aan lagu bixin karin shati aan habboonayn.
Waxay u egtahay cunista bolse leh macaanka.
Ma ku isticmaali karaa websaydhkayga? Si kale haddii loo dhigo, boggeyga internetka waxaan ku soo rogi karaa dukumiintiyada xafiiska. Miyaan ku arki karaa oo ku saxaa aaladdan cusub? Mahadsanid..
Kudar dariiqooyin dheeri ah Dial Speed ​​Speed ​​Dial
Hordhac Qalabka xirmada JACK